M2TS ka MP4 - Olee otú iji tọghata M2TS ka MP4 na M2TS ka MP4 Ntụgharị
AVCHD video dekọrọ AVCHD camcorders, dị ka Sony HDR-SR1 camcorders. M2TS faịlụ na-emekarị idekọ jidesie 8cm Obere DVD S ọ bụ anụnụ anụnụ-ray DVD, SD ebe nchekwa kaadị na Memory Stick, ma ọ bụ dekọọ jidesie ike mbanye camcorder.
Isiokwu a ga-nwere ike ikwu ihe M2TS ka MP4 Ntụgharị. Mgbe ahụ, ị pụrụ ịnụ ụtọ gị M2TS video n'ebe ọ bụla na n'oge ọ bụla.
Part 1: Best M2TS ka MP4 Video Ntụgharị maka Windows / Mac
Part 2: Free M2TS ka MP4 Ntụgharị
Nkebi nke 3: Online M2TS ka MP4 Ntụgharị
Nkebi nke 1: Best M2TS ka MP4 Video Ntụgharị maka Windows / Mac (Yosemite gụnyere)
• tọghata 150+ video formats gụnyere MP4, M2TS, AVI, MKV, MOV, wdg
• Kachasị presets ka mfe tọghata ọ bụla video kwesịrị ekwesị n'ihi na gị Android ma ọ bụ Apple ntị, iMovie, Final Cut Pro, wdg
• Ọkụ M2TS ka DVD n'ihi na mma nkekọrịta na ndị enyi gị na ndị ikwu.
• Otu Pịa ngwa ngwa download YouTube, Facebook, Dailymotion videos na ndị ọzọ.
Rịba ama: N'ihi na Mac ọrụ, plese agbalị Wondershare Video Converter Ultimate for Mac.
Olee otú iji tọghata M2TS ka MP4
Dị nnọọ na-nkuzi n'okpuru na-esi tọghata M2TS ka MP4 na Windows. Ọ bụrụ na ị nwere Mac OS, dị nnọọ na-ndị nkuzi ebe a, Olee otú iji tọghata M2TS ka MP4 na Mac.
Nzọụkwụ 1 Add M2TS faịlụ
Ị nwere ike pịa "Tinye Files" oyiyi bọtịnụ ma ọ bụ, dị nnọọ ịdọrọ & nkwupụta ụda; dobe gị M2TS videos na faịlụ ndepụta nke M2TS ka MP4 Ntụgharị ozugbo.
Nzọụkwụ 2 Họrọ MP4 dị ka mmepụta format
Họrọ mmepụta format MP4 n'ihi na gị videos site na ịpị "mmepụta Format" oyiyi button, ịchọta "Format"> "Video"> "MP4". Ọ bụrụ na ị chọrọ iji tọghata M2TS ka MP4 maka playback na ngwaọrụ, ị na-atụ aro iji họrọ otu kachasị presetting maka ezipụta ngwaọrụ site na "Ngwaọrụ" udi.
Pịa "tọghata" button na-amalite tọghata M2TS ka MP4, na mgbe ahụ ị nwere ike nweta gị MP4 video mgbe ọtụtụ sekọnd.
Atụmatụ: Ị nwekwara ike dezie video na nke a M2TS ka MP4 Ntụgharị site na ịpị "Mwube" image button hazie elu ọdịyo na video parameters dị ka size, etiti ọnụego, bit ọnụego, wdg N'ozuzu na-ekwu okwu, ọtụtụ video hosting saịtị na-320 * 240pix dị ka ọkọlọtọ size maka ebugote. Ọ bụrụ na na site faịlụ ndị buru oke ibu maka bulite, ị nwere ike ibelata size ala site mwube a nta video bit ọnụego. Camcorders nwere ike idekọ video ruo 60fps, nke ga-dabara maka flash faịlụ. Na-atụ aro etiti udu 20fps, 15fps na 12fps.
Part 2: Free M2TS ka MP4 Ntụgharị,
# 1. Free Video Ntụgharị: Wondershare Free M2TS ka MP4 Ntụgharị
The free M2TS ka MP4 Ntụgharị ike ọ bụghị naanị tọghata videos, kamakwa download YouTube videos, ma dezie gị arụrụ n'ụlọ videos effortlessly.
Pro: Free, vasatail
1. Ọ bụ naanị na-enyere tọghata nkịtị videos, ma Video Converter Ultimate na-ahapụ gị tọghata videos ka 3D na HD.
2. Ị nwere ike iji ya na-esure vidiyo na DVD na ndebiri Otú ọ dị, Video Converter Ultimate akwado.
3. The 30X kasị ọsọ akakabarede ọsọ bụ naanị kwere maka 10 conversions, mgbe Video Converter Ultimate nwere dịghị-agaghị emeli.
Video Converter Ultimate Mma ka ndị kasị mma nile-na-otu M2TS ka MP4 Ntụgharị. Ọ nwere ike mere ka a video Ntụgharị, video nchịkọta akụkọ, YouTube Downloader, na ọbụna a DVD burner. Dị nnọọ ibudata ya n'okpuru nwere a na-agbalị!
> Resource> MP4> Olee otú iji tọghata M2TS ka MP4 Easily (Yosemite gụnyere)